जब अमेरिकामा एक नेपाली युवाकलाइ ३ जना युवतीले कार भित्रै ….! – NepalajaMedia
March 10, 2021 165
एजेन्सी । अमेरिकामा एक नेपाली उबर चालक माथि तीन जना महिला यात्रुले गरेको अ भ द्र ब्यवहार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । नेपाली चालकले माक्स लगाउन अनुरोध गर्दा ति महिला यात्रुले यस्तो ब्यवहार गरेका हुन् ।
गत आइतबार ३२ वर्षीय शुभाकर खड्कामाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । तीन जना चालक मध्य एक जना महिलाले माक्स नलगाएपछि उनले माक्स लगाउन अनुरोध गरेको अमेरिकाको न्युज संस्थालाई बताएका छन् । माक्स लगाए मात्र सेवा दिने भन्दै गाडी रोकेपछि ति महिला शोभाखर माथि जा इ ला गेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
सुरुमा माक्स नलगाए पनि वाटोमा किनेर लगाउलिन् भनेर आफुले माक्स बेच्ने पसल देखेपछि गाडी रोक्दा उनी माथि यस्तो भएको हो । उनीहरुले शुभाकरमाथि खोकेको प्रष्ट देखिन्छ । गाडीवाट झरेपछि पनि ति महिलाहरुले खु र्सानीको धु लोवा ला स्प्रे छ र्केको बताएका छन।
कारमा रहेको क्यामराबाट खिचिएको दृश्यमा एक महिला यात्रुले उनीमाथि खोकेको, उनको मोबाइल खो स्न खोजेको, मा स्क चुँ डालिदिएको देखिन्छ । महिलाहरु क रा इ रहँदा उनी चुपचाप बसिरहेको देखिन्छ । एक जना महिलाले मोवाइल खोस्न लागेपछि उनले आफ्नो सम्पत्तीमा हात नलगाउन भनेका छन् ।
शुभाकर आठ वर्षअघि नेपालबाट अमेरिका पुगेका हुन। त्यहाँको कमाईले उनले नेपालमा रहेको आफ्नो परिवारको जोहो गर्ने गर्छन। स्थानीय प्रहरीका अनुसार ती महिलाहरु अझैपनि फ रार छन। शुभककरको सहयोगका लागि भने गोफन्डमीमा सहयोग अभियान सुरु भएको छ।
Prevपाँचतारे होटलमा अर्डर गरे केरा, बिल देखेपछि यी नायकको उड्यो होस्
Nextबिनय जंग बस्नेत जेल बाट रिहा भए।। भन्छन् सत्यको जित भो ;मैले केही गल्ती गरेको थिएन( भिडियो सहित)
बर्दिया पछि पर्सामा पनि बाघले मान्छे खायो! यस कारण खान्छ बाघले मान्छे